Somali - PM Proofreading
PM Proofreading-ka waa adeeg-bixiye Cabiraadinta iyo Tifatirka Caalamiga ah
Adeegyada ‘Proofreading Services’ PM waxay horseed u yihiin bixinta iyo tafatirka adeegyada bixiya ee la aas aasay sanadkii 2012. Waxaan u fidinaa adeegyadayada turjumaada macalimiinta, cilmi baarayaasha tacliinta, ardayda jaamacada, joornaalada, jaamacadaha, ganacsiyada iyo khubarada warshadaha heer caalami. Adeegyadeenu waa kuwo tayo leh oo la hubo oo lagu kalsoonaan karo, nidaamkeenna toosanna waa mid aamin ah oo lagu kalsoonaan karo nabad buuxda oo maskaxeed. Jawaab celinta macaamiisha caalamiga ah ee soo noqonaysa waxay muujineysaa sumcaddeena tayada, dib u habeyn wax ku ool ah iyo qiime macquul ah.
Nidaamkeenna habeysan wuxuu ka kooban yahay akhrin ballaaran (higgaadinta / higgaadinta, naxwaha, xarakaynta) iyo tafatirka (qaab dhismeedka jumlada, isku xirnaanshaha iyo qulqulka, hadal kooban iyo adeegsi cad, erey bixin tacliineed / midab). Waxaan nadiifin doonaa qoraalkaaga oo waxaan u diyaarinnaa daabacaad ama daabacid. Waxaan la soconaa dhammaan isbeddelada lagu sameeyay shaqadaada, si aad uga gudubto dhammaan isbeddelada la sameeyay oo aad u doorato inaad aqbasho ama diiddo isbeddel kasta. Labada nooc ee isbeddelka la raad raacay iyo nooca ugu dambeeya ee nadiifka ah ee qoraalkaaga dib ayaa laguugu soo diray. Waxaan sidoo kale ku darnaa faallooyin ku saabsan halka aad karti ugu yeelan karto inaad wax ku qorto. Hubinta tayada kama dambaysta ah ee hubinta tayada kadib waxaa sameeya akhriste labaad si loo hubiyo in qoraalka dib loogu celiyo qalad la’aan.
Akhristeyaasheena Ingiriisiga ah
Kooxdayadu waxay ka kooban yihiin khubaro maado-maadi ah, oo leh aqoon sare oo heer Master iyo PhD ah oo ka socda Jaamacadaha ugu sareeya. Akhriste kastaa wuxuu ku takhasusay edbin gaar ah, wuxuuna wax ka beddeli lahaa qoraal gacmeedyada inta ay le’eg yihiin takhasusyadooda. Sidan ayuu cadeeyahu awood ugu leeyahay inuu si qumman u saxo qoraalka, maaddaama isagu ama iyadu ay yaqaanaan ereyada muhiimka ah iyo eraybixinno gaar ah oo loo adeegsado qaybtaas gaarka ah. Akhristayaasha ka tarjumaya anshax kasta ayaa la heli karaa.
Waxay leeyihiin sannado badan oo waayo-aragnimo ah dib-u-akhrin ah, waxayna leeyihiin khibrad looga baahan yahay inay si taxaddar leh u caddeeyaan shaqadaada si kaamil ah, isla mar ahaantaasna loo ilaaliyo macnaha loogu talagalay iyo taabashadaada shakhsi ahaaneed. Xubnaha kooxdeena mid kasta wuxuu maraa nidaam qoris adag oo xulasho ah, oo wuxuu raacaa habsocodyada hubinta tayada la hubo ee la aqoonsan yahay sida kuwa ay adeegsadaan ‘Machadka Sharci ee Editing and Proofreading’ (CIEP). Qaar ka mid ah xubnaha kooxdayada ayaa hoos ku taxan.
Wadashaqeynta Jaamacadaha Caalamka
Waxaan wada shaqeyn toos ah la yeelanay ardayda jaamacadda, macallimiinta iyo shaqaalaha tacliinta sare ee jaamacadaha heer caalami ah illaa iyo 2012. Fadlan nala soo xiriir haddii aad rabto inaad nala shaqeyso.